Fizarana ao amin'ny Windows News
En Windows News hahita loharanom-pahalalana marobe ho an'ny solo-sainao Windows ianao. Ny fampahalalana sy ny fampianarana rehetra momba ny rafitra fiasanao, ny vaovao farany sy ny fanavaozam-baovao avy amin'ny Microsoft ary ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny endrika rindrambaiko sy fitaovana.
Ny tanjonay dia ny hahatonga ity zoro ity ho loharanom-baovao hanananao solosaina haingana, azo antoka ary azo antoka. Ny atinay rehetra dia nosoratan'i ekipa mpanonta anay, Manam-pahaizana momba ny Windows.
Smartphone amin'ny Windows
Browser sy Internet
Hevitra ho an'ny Windows